बिविध – SabKura Samachar
पब्जी मोबाइल गेमको क्रेज कतिपय मानिसमा यतिधेरै हुँदो रहेछ कि लाखौँ खर्च गरेको पनि होस हुँदैन । भारतको पन्जाबमा एकजना किशोर पब्जीको लतमा यति नराम्रोसँग फसेछन् कि उनले पब्जी खेलेरै बाउआमाको २७ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको पैसा स्वाहा पारिदिए । समाचार अनुसार इन एप पर्चेजेज तथा अपग्रेडिङका लागि उनले १६ लाख भारु खर्च गरे । …
पब्जीको लत : किशोरले रित्याइदिए बाउआमाको २७ लाख रुपैयाँ Read More »
सर्वोच्चको आदेशपछि ज्ञानेन्द्र शाही रिहा
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै ज्ञानेन्द्र शाही रिहा भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले शाहीलाई रिहा गरेको हो । शाहीलाई रिहा गन माग गर्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनी लकडाउन उल्लंघनको आरोपमा वैशाख ९ गते पक्राउ परेका थिए । …
सर्वोच्चको आदेशपछि ज्ञानेन्द्र शाही रिहा Read More »
काठमाडौँ । इलामको फाकफोक खोलामा सोमबार दिउँसो आएको बाढीले जलाइँदै गरेको शव वेपत्ता पारेको छ । खोलामा आएको बाढीले स्थानीय राम लकान्द्रीको शव वेपत्ता पारेको हो । चर्को घाम लागेको समयमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका– ३ स्थित फाकफोक खोलामा चितामा राखेर लकान्द्रीको शव जलिरहेको अवस्थामा एक्कासी आएको बाढीले बगाएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय विष्णु पौलेलले …
शव जलाउन लाग्दा इलाममा एक्कासी बाढी, शव नै बगायो (भिडियो) Read More »
नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक संजालमा भईरहेका चर्चा, केहि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनलाइन पोर्टलमा आएका क्षुद्रग्रह १९९८ ओ‍.आर.२ सम्बन्धी समाचारहरुले नेपाली जनमानसमा पर्ने गरेको छाप प्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराएको छ । प्रायः राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै स्तरका समाचारले यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीदेखी नजिकै आउने बताइएको भए पनि कति नजिक आउने …
वैशाख १७ गते पृथ्वीनजिक आउने क्षुद्रग्रहले पृथ्वीलाई खतरा छ ? Read More »
फेसबुकमा मजाक गर्दै यस्तो स्टाटस राखेपछि पक्राउ गर्न यी युवकको घरमै पुग्यो प्रहरी
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउँनका लागि मान्छेहरु अनेक गरिरेका हुन्छन् । तर पछिल्लो समय प्रहरीले त्यसका क्रियाकलापहरुमा पनि नजर राख्दै आएको छ । फोटोशप गर्ने, गलत्त सन्देश दिने मिम बनाउनेहरु लगातार पक्राउ पर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि लेखेकै भरमा पनि धेरै प्रहरीकहाँ पुगेका छन् । यस्तै, जिस्केर राँगाको सुकुटीलाई जरायोको भन्दै प्रचार गर्दा …
फेसबुकमा मजाक गर्दै यस्तो स्टाटस राखेपछि पक्राउ गर्न यी युवकको घरमै पुग्यो प्रहरी Read More »
कोरोना जितेकी युवती भन्छिन्, ‘कोरोनाको औषधि नै धैर्य र आत्मबल’
बागलुङकी कोरोना सङ्क्रमित १९ वर्षीया युवती शुक्रबार कोरोनामुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन् । युवतीको पाँचौँ र छैटौँ स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले कोरोनामुक्त भएकी धवलागिरि अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेकी १९ वर्षीया अंशु सापकोटाकोे पाँचौँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पुनः स्वाब परीक्षणका लागि शुक्रबार पोखरा पठाइएको र छैटौँ स्वाबको नमूना पनि नेगेटिभ …
कोरोना जितेकी युवती भन्छिन्, ‘कोरोनाको औषधि नै धैर्य र आत्मबल’ Read More »
लकडाउन थप्ने कि मोडल परिवर्तन गर्ने ? आज हुन्छ निर्णय
काठमाडौँ । चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले शनिबार निर्णय गर्ने भएको छ । त्यसका लागि शनिबार बिहान ११ बजे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्दैछ । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको समय वैशाख १५ गते सोमबार रातिदेखि सकिदैछ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ उच्चस्तरीय …
लकडाउन थप्ने कि मोडल परिवर्तन गर्ने ? आज हुन्छ निर्णय Read More »
नेपालमा तीन महिनाको अवधिमा १२ जिल्ला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित भएका छन् । नेपालमा पहिलोपटक १० माघ २०७६ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमितमध्ये केही निको भएकाले अहिले केही जिल्लामा संक्रमण शून्य रहेको छ । संक्रमणको आधारमा सबैभन्दा बढी उदयपुर प्रभावित भएको छ । प्रदेश १ का उदयपुर, भोजपुर र झापा, प्रदेश …
१२ जिल्ला कोरोनाबाट प्रभावित Read More »
बर्दिवास : महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका ३ स्थित पाटुको घुम्तीमा शनिवार बिहान बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । अर्का एकजना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुने तामाकोशी ३ दोलखा घर भएका २२ वर्षीय प्रदिप बिश्वकर्मा रहेका छन् । लकडाउनको समयमामा काठमाडौँमा अलपत्र परेका मानिसलाई लिएर उदयपुरको चौरन्दी नगरपालिकातर्फ गईरहेको बा ३ ख ४०३६ नम्बरको …
काठमाडौंबाट उदयपुर जाँदै गरेको बस दुर्घटना Read More »
जनकपुर । धनुषाको एक क्वारेन्टाईनमा बसेकी युवतीमाथि बलात्कार प्रयास भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । धनुषाको विदेह नगरपालिका वडा नम्बर ६ को क्वारेन्टाईनमा एक सातादेखि बस्दै आएकी २२ वर्षीया युवतीमाथि गएराती बलात्कार प्रयास भएको घटना सार्वजनिक भएको हो । गएराती अन्दाजी ११ बजेतिर क्वारेन्टाइनमा विदेह नगरपालिकामा बस्ने एक महिलालाई सरसफाई कर्मचारी २८ वर्षीय सञ्जिव पासवानले …
क्वारेन्टाइनमा युवतीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा युवक पक्राउ Read More »